पुल नहुँदा पढाइबाट वञ्चित हुँदै विद्यार्थी « Farakkon
पुल नहुँदा पढाइबाट वञ्चित हुँदै विद्यार्थी
प्रकाशित मिति : २०७५ चैत्र १ गते शुक्रवार
देउखुरी, १ चैत्र ।
सुकौलिनाका, सिरियानाका, पटौलिनाका दाङको पूर्वि सीमाना क्षेत्रमा पर्ने नाकाहरु रुपमा चिनिन्छन् । अति दुर्गमै दुर्गम बस्तीले झेलिएको, अन्धकारमय बनेका छन् नाकाबासीहरु । नाकाको विकासे योजनासँग खेल्न नपाएको नाकाबासीहरुको गुनासो छ । आवतजावतको लागि बाटाघाटाहरु छैनन् । पुलविहीन गाउँपालिका भनेर चिनिने एकमात्र गाउँपालिका, त्यो हो दाङको राजपुर गाउँपालिका ।
यही दुःख र समस्याहरु झेल्दै सिरिया नाकाबाट पढ्नको लागि दिनहुँ ८ घण्टाको बाटो पैदल हिडेर आउछन्, राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर १ सिरिया नाका निवासी जनज्योती माध्यमिक विद्यालय बेलास्थित कक्षा ९ मा अध्ययनरत सुस्मिता पुन मगर । बिहानको समय खाजा खाने समय हो, तर सुस्मिताले बिहानै नास्ताको साटो खाना खान्छिन् । यो कुरा सुन्दा अचम्म लाग्छ होला तर, सत्य हो ।
किन कि सुस्मिताले बिहानै ७ बजे खाना खाई घरबाट निस्किन्छन् विद्यालय भेटाउनको लागि । भनेको समयमा स्कुल भेटाउन सक्दैनौ, विद्यालय जाँदा पहिलो दोस्रो पिरियड सधै छुट्छ । पढाइमा असर पुगेको पुन मगरको भनाइ छ । यस्तो पीडा छ हामी नाकाबासीहरुलाई तर, यो पीडा र मर्का कसलाई सुनाऊ ? सुन्ने कोही छैनन् ? सुस्मिताले प्रश्न गरिन् ।
आजभोलि स्कुल अगाडि कोठा लिई बस्ने थालेको छु, पढ्नको लागि निकै समस्या झेलेका छौँ हामी नाकाबासीहरुले । रासन पानी सबै भर्नुपर्छ, बुबा, आमा बेरोजगार हुनुहुन्छ, पानी बत्तीको बिल र कोठा भाडा तिरी बस्दा निकै गाह्रो हुँदो रहेछ । पठनपाठनको लागि निकै समस्या छ, उनले भनिन् भनेको बेला पैसा हुँदैन ।
यस्तै राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर १ सुकौली नाका निवासी पार्वती सुनारको पनि यही समस्या छ । सुनार सुकौली नाकाबाट हिडेरै आउने गर्छन् । समयमा विद्यालय भेटाउन नसकेपछि सुनारले पनि कोठा लिइ बस्न बाध्य भए । छ वर्षभयो कोठा लिइ बस्न थालेको घरको आर्थिक स्थिति कमजोर छ । कोठा भाडा लिइ बस्नु परेको छ । सबै किनेर खानुपर्छ, खाने हो कि पढ्ने हो ? आर्थिक स्थिति निकै कमजोर छ ।
छात्रावासको सुविधा भएको भए राम्रो हुने थियो । दुईतर्फी खर्च हुनुबाट जोगिन्थ्यौँ सुनारले भनिन् । आकाशमा कालो बादल छाउने बित्तिकै विद्यार्थीहरु सर हामीलाई घर जान बिदा दिनुस् भन्न आउँछन् । जनज्योती माध्यमिक विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक केशवराम यादवले भने । बिदा नदेऊ कसरी नदेऊ ? घर फर्किदा माररी खोला, गुरुङ खोला, रसरी खोलालगायत अन्य खोलाहरुले बाटो छेक्छ ।
विद्यार्थीहरु कराउँछन्, हामीलाई किन बिदा दिनुभएन सरले ? हाम्रो समस्या सरले बुझ्नु भएन ? भनि कराउँछन् । बर्षायाममा खोलाहरु पुल नहुँदा निकै समस्या छ । बर्षायाममा खोलाहरुको सोता बढ्यो भने विद्यार्थी आउँदैनन् । बर्षायाममा कहिलेकाहिँ बाध्यताले विद्यालय बन्द हुन्छ, प्रध्यानाध्यापक केशवराम यादवले भने । धेरैजसो विद्यार्थीहरु नाकाबाट आउँछन् पढ्नको लागि ।